यो संवादको सामग्रीहरू डेटा फाँटहरूका लागिडेटा क्षेत्रमा र संवादको Row वाColumn Pivot Tableक्षेत्रमा डेटा फाँटहरू फरक छ।
उपजोड निर्दिष्ट गर्दछ जसलाई तपाईँं गणना गर्न चाहनुहुन्छ ।
उपजोडहरू गणना गर्दैन ।
स्वचालित रूपमा उपजोडहरू गणना गर्दछ ।
यो विकल्प यन गर्नुहोस् त्यसपछि उपजोडको प्रकार क्लिक गर्नुहोस् जसलाई तपाईँं सूचीमा गणना गर्न चाहनुहुन्छ ।
चयन गरिएका डेटा फाँटको नामको सूचीकृत गर्दछ.
संवादहरू फैलाउँदछ वा घटाउँदछ । धेरै बटन डेटा फाँटहरूका लागि मात्र दृश्यात्मक हुन्छन् ।
यदि संवाद धेरैबटनद्वारा बढाइएको खण्डमा दिएका वस्तुहरू संवादमा थपिन्छ:
प्रत्येक फाँटहरूका लागि तपाईँं प्रदर्शनको प्रकार चयन गर्न सक्नुहुन्छ । केही प्रकारहरूका लागि तपाईँं आधार फाँट र आधार वस्तुका लागि थपरूपमा जानकारी चयन गर्न सक्नुहुन्छ ।
परिणामहरू अपरिवर्तित रूपमा देखाइन्छ
प्रत्येक परिणामबाट, यसको सन्दर्भ मान (तल हेर्नुहोस्) घटाइन्छ, र फरक देखाइन्छ । आधार फाँटको बाहिर पट्टिको जम्माहरूले खाली परिणामहरू देखाएका हुन्छन ।
यदि आधारभूत नाम निर्दिष्ट गरिएको खण्डमा फाँट वस्तुहरूको संयोजनका लागि सन्दर्भ मान परिणाम हुन्छ जहाँ आधारभूत फाँटमा वस्तु निर्दिष्ट आधारभूत वस्तुद्वारा बदलिन्छ ।
अघिल्लो वस्तु वा अर्को वस्तु
यदि "previous item" वा "next item" आधार भूतवस्तुको रूपमा निर्दिष्ट गरिएको खण्डमा सन्दर्भ मान आधारभूत फाँटको क्रमबद्ध क्रममा आधारभूत फाँटको अर्को दृश्यातमक सङ्ख्याका लागि परिणाम हो ।
प्रत्येक परिणाम यसको सन्दर्भ मानद्वारा भाग गरिन्छ । सन्दर्भ मान "Difference from"का लागि उही माध्यममा निर्धारण गरिन्छ । परिणामको रूपमा आधार भन्दा बाहिरका फाँटको जोडहरू देखिन्छन् ।
% बाट भिन्नता
प्रत्येक परिणामबाट यसको सन्दर्भमान घटाइन्छ र फरकलाई सन्दर्भमानद्वारा भाग गरिन्छ । सन्दर्भ मान "Difference from"को रूपमा उही माध्यममा निर्धारण गरिन्छ । परिणामको रूपमा आधार भन्दा बाहिरका फाँटको जोडहरू देखिन्छन् ।
जम्मा गर्दै गर्दा
प्रत्येक परिणाम आधारभूत फाँटरूको क्रमबद्ध क्रममा आधार फाँटमा प्रेषित गरिएका वस्तुहरूका लागि परिणामहरूको जोडमा थपिन्छ र जम्मा जोड देखाइन्छ ।
परिणामहरू प्राय जोडिएको हुन्छ । ताकि यदि प्रत्येक परिणाम पाउन फरक सारांश प्रकार्य प्रयोग गरिएको हुन्छ ।.
प्रत्येक परिणाम डेटापाइलट तालिकामा यसको पङ्क्तिका लागि जम्मा परिणामद्वारा भाग गरिन्छ । यदि तिनीहरू पृथक डेटा फाँटहरू भएको खण्डमा परिणामको डेटा फाँटका लागि जम्मा प्रयोग गरिन्छ । यदि तिनीहरू हातैले चयन गरिएका प्रकार्यहरू सहितका उपजोडहरू भएको खण्डमा डेटाफाँटहरूको सारांश प्रकार्यसहित जम्मा अहिले सम्म प्रयोग गरिन्छ ।
उही "% of row" को रूपमा तर परिणामहरूको स्तम्भका लागि जम्मा प्रयोग गरिन्छ ।
उही "% of row" को रूपमा तर परिणामहरूको डेटा फाँटका लागि कुल जम्मा प्रयोग गरिन्छ ।
पङ्क्तिहरू र स्तम्भहरू जम्मा र कुल जम्मा माथि दिएको नियम अनुसारनै दिएका अभिव्यक्तिहरू गणना गर्न प्रयोग गरिन्छ:
( मौलिक परिणाम* कुल जोड ) / (पङ्क्ति जम्मा * जम्मा स्तम्भ)
Title is: डेटा फाँट